शान्ति क्षेत्रदेखि बहुपक्षीयतावादसम्म
समृद्धि मार्गका खाडल
टिप्पणी शेखर खरेल
दुईतिहाइ बहुमतको ओली सरकारले देखाएको समृद्धिको सपना पूरा हुने पहिलो शर्त हो, हरेकजसो क्षेत्रका खाल्डाखुल्डीबाट चिल्लो सडकमा कायाकल्प ।
‘ठूला माछा’ खोइ ?
मोहन अग्रवाल र विमल पोद्दारसम्म पुगेको ३३ किलो सुन तस्करी सम्बन्धी अनुसन्धान किन त्यसभन्दा अघि बढेन ?
दुईतिहाइको हितकारी नभएसम्म जतिसुकै राष्ट्रवादी पगरी लगाए पनि केपी ओली दुईतिहाइका नेता बन्न सक्तैनन् ।
शहरमा बाढीको कहर
अहिलेको डुबान प्राकृतिक प्रकोप नभएर मानवसिर्जित समस्या हो भन्नेमा कुनै शंका छैन ।
गंगामाया र डा. केसीको मूल्य
गंगामाया अधिकारी र डा. गोविन्द केसीको सत्याग्रहलाई जति चाँडो सम्बोधन गर्‍यो सरकारका निम्ति उति हितकर हुनेछ ।
लोकतन्त्रवादी नै प्रकारान्तरमा कसरी अधिनायकवादीमा रुपान्तरित हुन्छ भन्ने संसारको पछिल्लो दृष्टान्तबाट प्रधानमन्त्री ओली नै सबैभन्दा बढी सावधान बन्नुपर्छ ।
जनताको शारीरिक र मानसिक तन्दुरुस्तीका लागि मात्र होइन, लोकतान्त्रिक मुलुक निरोगी हुन पनि सार्वजनिक स्थल (पब्लिक स्पेस) हरू व्यवस्थित हुन जरूरी छ ।
ढुंगेल रिहाइ प्रकरणः वाम सरकारमा न्याय निषेध !
सर्वोच्च अदालतबाट जन्मकैदको सजाय पाएका बालकृष्ण ढुङ्गेलको आममाफीले वाम सरकारमा न्याय निषेध भएको आशंकालाई बल दिएको छ ।
उन्नयन र अनुशासनका दोभान राष्ट्रकवि घिमिरे
राष्ट्रकवि घिमिरेको अन्तिम र उत्कृष्ट महाकाव्य ‘ऋतम्भरा’ आफ्नो जन्म शताब्दीका अवसरमा सार्वजनिक गर्ने उनको लक्ष्य पूरा हुनेछ ।
पश्चिमाहरू संक्रमणको डरले सकेसम्म हात मिलाउनु नपरोस् भन्छन् तर हामीचाहिं आधुनिक देखिनै पनि नमस्कार त्यागिरहेका छौं ।
मिथिला, मुक्तिक्षेत्र र मोदी
नाकाबन्दी नबिर्सिएका नेपालीजनले मोदीको तीर्थाटनबाट उत्साहित हुनुपर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण कारण हो– पर्यटन प्रवद्र्धन ।
समस्या अभिभाकत्व कि विद्यालयको स्तर ?
राज्यले व्यापक लगानी गर्नु तर सार्वजनिक विद्यालय टिठलाग्दो रहिरहनुको मूल कारण नीतिनिर्माता तहबाट अपनत्व नलिइनु नै हो ।
२०७५ सँग आशा
झण्डै सातदशकपछि पहिलोपटक संक्रमण–विहीन स्वराजको अनुभूति गर्न पाएको नेपालीका लागि निराश हुने छूट छैन ।
इन्द्रेणी कथा (पुस्तक चर्चा: भुइँखाट)
महेशविक्रम शाह पनि सातौं कथा संग्रह ‘भुइँखाट’ सहित फेरि उपस्थित भएका छन् । पछिल्लो कथा संग्रह ‘ज्याक्सन हाइट’ मा मुलुकको भौगोलिक सरहद बाहिरका कथानक रचेका शाहले ‘भुइँखाट’ मा चाहिं ‘मध्यरातमा म्यानहटन’ बाहेकका कथा स्वदेशी भूगोलभित्रैबाट उधिनेका छन् । उच्च हिमाली भेगदेखि तराई–मधेश, देहात र महानगरसम्मका कथानकहरू पस्किएर कथाका इन्द्रेणी बनाएका छन् ।
सम्बन्ध सुधार्न आतुर भारत
दुईतिहाइ जनादेशको बल र नाकाबन्दीपछिको उँचो राष्ट्रिय स्वाभिमान बोकेर भारत जान लागेका प्रम ओलीसँग द्धिपक्षीय सम्बन्धमा भाष्य रच्ने अवसर छ।
ऊर्जावान् युवा निर्यात गरेर समृद्धि सम्भव होला र !
नेपालको सबैभन्दा ठूलो निकासी मानवशक्ति नै हो । विश्व मानचित्रको यो मुलुक आफ्ना ऊर्जावान् र होनहार युवा निर्यातमार्फत ढुकुटी भरिरहेकोमा आनन्द लिन्छ
यदि कुनै भू–राजनीतिक घटना वा रोजगारदाता मुलुकको आन्तरिक कारणले नेपाली आप्रवासी कामदार फर्काइने अवस्था आए ती युवा शक्तिलाई मुलुक भित्रै ‘इन्गेज’ गर्ने भनेर राज्यले सोचेको छ त ?
प्रधानमन्त्री ओलीले पूरा गर्लान वाचा ?
दह्रो पकडसहितको पार्टी, तीन चौथाइ भन्दा बढीको समर्थन रहेको संसद्, अधिकारसम्पन्न प्रधानमन्त्री कार्यालय– ऐतिहासिक अनुकूलतासहितको सिंहदरबार पाएका प्रम ओलीलाई जनतासँग गरेका बाचा पूरा गर्नुबाहेक शासन सञ्चालनमा यदि र तर जोड्ने गुञ्जायस छैन।
न त बीपी कोइरालाले सामना गर्नु परेको राजसंस्था जस्तो परम्परागत शक्ति ओलीका अगाडि उभिएको छ, न त कृष्णप्रसाद भट्टराईले भोग्नु परेको जस्तो पार्टीभित्रकै अन्तर्घात । बरू, आफ्नै पकडको पार्टी र रुचिका राष्ट्रपति उनका निम्ति थप अनुकूलता हुनेछ ।
पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री अब्बासी आगमनको अर्थ
जुन समय र परिस्थितिमा पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीको भ्रमण भएको छ, त्यसबाट भारत झस्किएकै हुनुपर्छ ।
राष्ट्रपतिमा भण्डारीकै सम्भावना प्रबल
पार्टीका पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालमा भने राष्ट्रपति पदको आकांक्षा तीव्र देखिएको छ । तर, खनालबाट भविष्यमा आफूमाथि कुनै चुनौती नदेखेका कारण पनि ओली उनलाई राष्ट्रपति बनाइहाल्न जरूरी ठान्दैनन् ।
संघीयताका सात सारथि
संशयकै बीच अभ्यास थालिएको संघीयताको सफलतामा केन्द्रको नीतिभन्दा सात प्रदेशको राजनीति र नेतृत्वको कार्यशैली निर्णायक हुनेछ।
विश्वविद्यालय कि ‘वुचरिङ् हाउस’?
नेपालको चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा सुधारको शुरूआत कार्की आयोगले देखाएका खलपात्रहरूमाथि कारबाहीबाट हुनुपर्छ।
कांग्रेसको शुद्धीकरणमा देखिएको अन्योल
कांग्रेसलाई ‘जुत्ता पालिस’ जस्ता कार्यक्रमद्वारा शुद्धीकरण गर्नु भनेको क्यान्सर लागेको बिरामीलाई केमोथेरापी नदिएर सिटामोल खुवाए जस्तै हो ।
को बन्दैन सांसद् !
राष्ट्रिय जीवनका परिपक्व र प्राज्ञिक व्यक्तित्व चुनिनुपर्ने राष्ट्रिय सभामा ‘कोमल वली’ प्रवृत्ति हावी हुनु राजनीतिक विकृतिको उत्कर्ष हो।
कांग्रेस पनि राष्ट्रिय सभा सदस्यको चयनमा नराम्ररी चुकेको छ । प्रतिनिधिसभाको टिकट वितरणमा वञ्चित गुरु घिमिरे, कल्याण गुरुङ जस्ता युवा नेताहरू राष्ट्रिय सभामा समेत अटाउन सकेनन् ।
न्यायालय जोगाउने लडाइँ
प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध डा. गोविन्द केसीले गरेको पछिल्लो अनशन टुंगिए पनि जनमानसमा गिरेको न्यायालयको साख फर्काउन बाँकी छ।
पुनः पृथ्वीजयन्ती मनाउने सरकारी घोषणाले क्रमभङ्गता र नयाँ नेपालका नाममा ऐतिहासिक धरोहर मास्नु आफ्नै अस्तित्व नामेट पार्नु रहेछ भन्ने चेत खुलेको आभास दिलाएको छ।
एमाले–माओवादी एकता राजनीतिक आस्था वा सत्ताप्राप्तिको अभीष्ट ?
दुई कम्युनिष्ट घटकबीचको एकता अस्वाभाविक होइन । तर, यो एकता बलियो कम्युनिष्ट पार्टी गठनमार्फत राजनीतिक स्थायित्व दिने उद्देश्यले प्रेरित छ, वा यसको अन्तर्य सत्ता प्राप्ति मात्र हो, गाँठी प्रश्न नै यही हो ।
वाम गठबन्धनको कार्य सम्पादनमा संघीयताको भविष्य
निर्वाचन परिणामले प्रतिपक्षीलाई कमजोर बनाएको छ । त्यसैले संघीयताको सफलता पनि वाम गठबन्धनको कार्य सम्पादनले निर्धारण गर्नेछ ।
लोकतन्त्रको लागि सबल सत्तापक्ष र सशक्त प्रतिपक्ष
आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको मुख्य अवयव हो । तर, निर्वाचन मात्रले लोकतन्त्र प्रत्याभूत गर्न सक्दैन । किनकि, संसारमा अझै पनि त्यस्ता धेरै मुलुक छन्, जहाँ आवधिक निर्वाचन हुन्छ तर लोकतान्त्रिक व्यवस्था छैन ।
टुङ्गिन लाग्यो गणतन्त्रको संक्रमण
कुनै पनि शासन फालिंदा शासकभन्दा बढी छटपटी तिनका नातेदार, आसेपासे र सुविधाभोगीमा देखिन्छ । किनकि, उनीहरूले परिवर्तनसँगै शासकको अनुकम्पा गुमाउँछन्, अनायास अनिश्चित भविष्यको बाटो तय गर्नुपर्छ ।
जोगाऔं वेस्टमिन्स्टर प्रणालीलाई
मतदाताको निर्णायक तप्काले पार्टी भन्दा पनि परिस्थितिप्रति सरोकार राख्दै आएको देखिन्छ । दल निरपेक्ष यो तप्काले गुण र अपेक्षाका आधारमा जुन दललाई सत्तामा पुर्‍याएको छ, त्यही दललाई दोष र निराशाका आधारमा सत्ताबाट झारेको पनि छ ।